VUMELA WONKE UMNTU WONWABELE IMIDLALO EMDLALO
Ezona ndawo ziBalaseleyo kwiMidlalo 2020& 2021 yaBadlali beHlabathi liphela
Umdibaniso weMidlalo yokuDlala
Injongo yokuhlangana kukwanelisa abathengi bethu behlabathi kunye nabadlali ngokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho onokuthenjwa wokuqinisekisa ukuba wonke umthengi kunye nomdlali banokuziva bekhululekile kwaye beqinisekile ngemida yethu yokudlala kwizicelo zabo. Imouse yokudibanisa imouse kunye nebhodi yezitshixo, okanye ezinye izinto zokudlala ziye zafumana ngokubanzi usetyenziso lwazo kwimarike ngenxa yeempawu zazo ezintle. Banemisebenzi emininzi eqinisekisa ukwandiswa kunye nokusetyenziswa.
I-Ergonomic 2.4g ye-wireletiged fertt R390 / M390
Into No. :mt-r390Uphawu: meetionFaka umbala: MnyamaUkufumaneka: KwisitokhweI-EAN: 6970344731868Inkcazelo
I-SLIM 2.4G i-Wireless yeKhowudi yeKhompyuter yeKhompyuter Wk84
Into No.Mt-wk841Uphawu: meetionFaka umbala: Mnyama& mhlopheUkufumaneka: KwisitokhweI-EAN: Mnyama: 6970344731646 Mhlophe: 697034731691Inkcazelo
I-Pager yeDestar enkulu ye-Gamer Graing Pot P100
Into No.Mt-P100Uphawu: meetionFaka umbala: MnyamaUkufumaneka: KwisitokhweI-EAN: 697034731394Inkcazelo: Imo yemouse enkulu yokudlala
Imouse yerabha yerabha ye-ralber pad p110
Into No.mip-p110Uphawu: meetionFaka umbala: MnyamaUkufumaneka: KwisitokhweI-EAN: 697034731370Inkcazelo
Ukusukela oko yasekwayo, i "Khuthaza ukuphuhliswa kwesayensi kunye neemveliso zetekhnoloji, nzulu ukuqaliswa kwenkonzo yesayensi kunye netekhnoloji" ibeyifilosofi yeshishini ye-Meetion. Uthotho loyilo lwemidlalo yefashoni yomda& izimvo ezizodwa& Umgangatho ophezulu we-pc yokudlala kunye nezixhobo zekhompyuter& izincedisi zithengiswe ngempumelelo phantsi kwefilosofi.
Amandla enkampani aphezulu emandla enkampani: Ukuba nabasebenzi abangaphezu kwama-200; Indawo yeFektri ngaphezulu kwe-10000㎡; Imigca emithandathu yokuhlangana ngokuzenzekelayo kwemveliso; Engaphezulu kwe-10 oomatshini ziphene ezikrelekrele yokubumba; Iipheripherali zemidlalo yekhompyuter kunye nezinto zePC ezikhutshwa ngenyanga ngaphezulu kweeseti ezingama-800,000. Siyaphumelela kwaye siyiphumeze ngokungqongqo inkqubo yezatifikethi yomgangatho wamazwe aphesheya i-ISO 9001: 2008. Zonke iimveliso zokuhlangana zidlula isiqinisekiso sehlabathi i-CE, i-FCC, i-RoHS, kunye ne-REACH, njl.
Ngenxa yedumela elilungileyo, umgangatho ogqibeleleyo kunye noyilo kwinqanaba eliphezulu, umsinga oqinisekileyo weemveliso zithunyelwa ngaphandle ukusuka KWI-MEETION ukuya kwamanye amazwe nakwimimandla yehlabathi; kwaye sisekele ubudlelwane obuhle bokusebenzisana neenkampani ezaziwayo ze-IT phakathi kwekhaya nakwamanye amazwe.